Ragunda | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Jämtlands län / Ragunda
Degmada Ragunda waxeey ku taal bariga gobolka Jämtland. Dadka degan degmada badankood weey is garanayaan. Taasna waxeey abuureysaa isku dhawaansho iyo ammaan gabid. Waxaan nahay dad iska war qaba. Masaafada eey xafiisyada dowladda dadka u jiraan weey dhowdahay, safafka guryaha loo galo lagama yaqaano meeshaan.
2,633 kiilomitir oo laba jibaaran
Östersund 97 kiilomitir
Sundsvall 108 kiilomitir
Örnsköldsvik 160 kiilomitir
Masawirqaade: Fredrik Backlund
Gudaha Ragunda waxaa laga helaa guryo xaafadahayaga Bispgården, Stugun iyo Hammarstrand. Ragunda Bostad waa shirkada guryahay degmadu leedahay taas oo maamusha guryaha laakiin waxaa xitaa jira mulkiilayaal dhisme oo gaar loo leeyahay sida Sundsvalls bostäder iyoKA Driftteknik AB kuna taala Bispgården.
Waxaa kaloo jira fursado aad guryo ku kireysan kartid/ama gadan kartid, guryahaasoo ku yaal xaafadaha banaankooda. Guryahaas waxaa laga baahiyaa bogagga xayeeysiinta sida Blocket iyo Hemnet.
Ragunda Bostad Sundsvalls bostäder KA Driftteknik AB
Ragunda waxaa looga hadlaa 30-meeyo luqadood sida af-soomaaliga, tigree, carabi, burmees, isbaanish, iiraani/daari, jeek rebablikaan, islofaanikaan iyo holandees.
Degmada qurxoon ee Ragunda waxaa yaala hoowlaha firfircoonida ee xilli firaaqaha oo badan. Garoon caws artifishaal uu yaallo, goobo isboortis, garoon fardo fuul, meelo lagu socdo, meelaha ciyaaraha barafka oo nuucyo badan leh. Hadaad rabtid inaad macluumaad dheeraada ka ogaatid howlaha firfircoonida ee xilli firaaqaha waxaa jira jaaliyado kalluumeeysi iyo jaaliyado kale.
Waxyaabaha dhaqanka la xiriira ee degmada weey badan yihiin waxaana jira jaaliyado badan oo da' kasta loogu tala galay. Iskoolkeena hiddaha iyo dhaqana waxuu ka mid yahay kuwa Iswiidhan oo dhan ugu fiican.
Dukaamo cunto, makhaayado, biibitooyin iyo maktabad ayaa waxeey ku yaallaan xaafadaha bartamaha degmada ku yaal ee Bispgården, Hammarstrand iyo Stugun. Hammarstrand waxaa ku yaal xafiis degmo, xafiiska shaqada, shineemo, farmashiiye, isteeshin boliis, dukaamo badan iyo dukaamada gacan labaad. Degmada xarunteeda is dhexgalka dadka waxeey xafiis ku leeyihiin Bispgården iyo Hammarstrand.
Iskoollada xanaanada caruurta oo dhan waxaad warbixinnadooda ka heli kartaa degmada Ragunda boggeeda internetka. Degmad waxeey kaloo leedahay xarun xanaanada qoyska ah oo ku taal xaafada Hammarstrand iyo xanaanada furan oo ku taal Bispgården halkaasoo eey waalidiinta iyo carruurtooda isla aadi karaan.
Waxaa degmada Ragunda ku yaal afar dugsi hoosedhexe ah. Iskoollada Hansåkerskolan F-9 oo ku yaal Stugun, Järåskolan F-6 oo ku yaal Bispgården iyo Kullstaskolan F-5 iyo Anders-Olof skolan 6-9 oo ku yaal Hammarstrand.
Dugsiga sare ee Jämtlands gymnasium Bispgården (JGY) waxaa lagu bartaa barnaamijyada korontada iyo enerjiga, barnaamijka farsamada warshadaha iyo barnaamijka horudhaca sida kan luqadaha ee IM-språk.
Bispgården waxaa ku yaal iskool waxbarashada dadka waaweyn oo leh heerarka dugsiga hoosedhexe iyo sare iyo waxbarashada xirfadaha kala duwan. Waxaa kaloo jira waxbarasho xirfadeed ah dhinacyada alxanka iyo gacan yaraha kalkaalisada. Waxbarashada luqada iswiidhiska ee loogu tala galay dadka qaxootiga waxaa loo aadaa xaafada Hammarstrand.
Rug caafimad iyo dakhtarka ilkaha waxa laga hela Hammarstrand iyo Stugun. Bispgården waxa ku yaal rugta qaabilada ee kalkaalisoyinka.
Degmada Ragunda waxeey u dhaxeeysaa Sundsvall iyo Östersund, waxeey ku dhex taal bad iyo buuro qurux badan. Xaafada bartamaha degmada ku taal ee Hammarstrand waxeey 11 mayl u jirtaa Sundsvalla, 10 maylna waxeey u jirtaa Östersund 7 maylna waxeey u jirtaa Sollefteå. Jidka loo soo aado Ragunda waa inaad tareen ama diyaarad ku tagtid Östersund ama Sundsvalla kadibna aad baabuur ama bas soo raacdid. Maamulka gaadiidka dadweynaha ee gobolka Jämtland waxaad ka heli kartaa wakhtiyada basaska eey baxaan.
Degmada Ragunda waxeey ku taagan tahay dakhliga dhaqaale ee kasoo gala degmada oo ku saleeysan wax soosaarka 450 shirkadood iyo ururo. Shirkadaha badankood weey yaryar yihiin waana kuwo gaar loo leeyahay. Maadaama eey degmadu yartahay go'aamada kala duwan si dhaqsi ah ayaa loo gaaraa. Qaar kamid ah shirkadaha waaweyn ee degmada waa: Fors industrier, SCA Timber iyo Moderna försäkringar. Degmada Ragunda waa shaqa bixiye weyn gaar ahaan dhinacyada iskoollada iyo caafimaadka.
Fors industrier SCA Timber Moderna försäkringar
Shaqooyinka ka banaan gudaha Ragunda